Raw Noopept powder (157115-85-0) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw Noopept powder (157115-85-0) Tsanangudzo
Raw Noopept powder ndeyekugadzirisa zvinogadzirisa zvinoita zvakanyanya kupfuura Piracetam mukubata nekunzwa kwepfungwa mushure mekurwadziwa kwevascular or traumatic brain injuries.
Iko kunzwisisika kunokonzera Raw Noopept powder (N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester) yakapoteredza 1000 nguva dzakasimba kudarika piracetam. Piracetam inovandudza chikwata chekutanga chekuyeuka, asi Raw Noopept powder inovandudza nekugadzirisa uye kuwana zvikamu zvekuyeuka. Izvo zvinopesana nekuzvidya mwoyo, antioxidant, anti-inflammatory, uye zvinodzivirira neurotoxicity kubva pakuwedzerwa kweamyloid pamwe nekuvandudza kubuda kweropa.Inobatsira nekurara kwakanaka kweusiku, kusagadzikana, kurara, kuora musoro, uye kuva nesimba rinodiwa kutora zuva. Inobatsirawo nekuzvidya mwoyo, kuyeuka, uye kushungurudzika.
Raw Noopept powder (157115-85-0) Specifications
Product Name Raw Noopept powder
Kemikari Name N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, GVS-111
muchiso Name Raw Noopept powder
Molecular Wsere 318.373 g / mol
Kunyorera Point 97 ° C-98 ° C
Biological Half-Life 30-60 maminitsi
Skukodzera Raw Noopept powder inonyanya kushandiswa mumvura nootropic, asi haigoni kuparara nyore mumvura kana juice.
Storage Temperature Chengetedza munzvimbo yakasviba yakaoma pane kutonhora hakuna kukwirira kupfuura 25 ° C. Ramba uri kure nekusvika kwevana.
APane Shandisa pfungwa dzisina kukanganisa, kutarisa uye mamwe mabasa ekufunga uye pamwe nemanzwiro e labile zvinetso.
Noopept (GVS-111) ndiro zita reN-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, inogadzirwa neotropic molecule.
Kazhinji kuvhiringidzika sechikamu chemhuri ye racetam, hakunaopept inofanirwa neotropic peptide yakave yakagadzirwa muRussia kuti igadzire kugadzikana kwepfungwa. Nhasi, inoshandiswa nevakwegura uye vaduku vanoda nootropic zvakafanana uye vava imwe yezvinonyanya kukosha uye zvakakurumbira zvinodhaka zvinoshandiswa ikozvino.
Noopept powder zvakanyanya kupfuura piracetam uye zvimwe zvinokonzera kushandiswa kwemishonga inoshandiswa, hakunaopept ikozvino inoshandiswa seyakanyanyisa mishonga yemishonga yekurapa chirwere cheAlzheimer, dementia, uye mamwe makore ane makore akafanana ekukanganisika mune nyika dzakadai seRussia uye yekare yeSoviet Union.
Noopept yakakura pakuzivikanwa pamusoro pemakumi maviri emakore adarika uye ikozvino ndeimwe yeootropics yakakurudzirwa zvikuru mukati memunharaunda.
Noopept powder (157115-85-0) Mitiro weAtambo
Noopept ine nzira yakaoma yekuita. Izvozvo zvinoshandiswa pamusana pezvinodhaka zvinoshandiswa nemumwe wemashandisirwo ayo anoshandisa metabolites (cycloprolylglycine) yakafanana mukugadzirisa kusvika kune rimwe remapeptide rinogadziriswa rine anti-amnesic. Yakave yakasimbiswa kuti mishonga inowedzera kutaura kwe NGF neBDNF mumukoko, inoratidza choline-positive maitiro ekuzvibata uye neuronal mazinga, inoderedza hutano hwehutano uye hunosimudzira basa re antioxidant, uye inoderedza kinase pSAPK / JNK uye pERK1 inokonzerwa. Noopept inovandudza chiyeuchidzo nekuwedzera huropi mumakemikari anonzi BDNF uye nedzimwe nzira.
Benefits yeNoopept powder (157115-85-0)
Noopept Inovandudza Cognitive Performance uye Memory
Noopept Inobvisa Brain Fog
Noopept Inobatsira Nokuzvidya Mwoyo
Noopept May Kubatsira neAlzheimer's
Yakakurudzirwa Noopept powder (157115-85-0) Dosage
Noopept ine muzinga wepamusoro wakawanda kupfuura piracetam (4800mg), iyo inorayirwa kukosha kwekodhi is 10-30mg.
Maererano nekumwe kuongorora, noopept powder ndiyo 1000 nguva inopfuura yakakura kupfuura piracetam, ndicho chikonzero chirevo chinorayirwa chakanaka.
Zvikanganiso yeNoopept powder (157115-85-0)
Izvozvo zvinokonzerwa neNoopept powder zvinyoro uye vazhinji vashandisi havaoni chero migumisiro pane zvose. Zvimwe zvikamu zviduku zvisingabatsiri zvinowanikwa, asi kana iwe ukatora ino nootropic inopfuura yakawanda inogona kukonzera misoro, kuneta, kuora mwoyo uye kusuruvara.
Noopept Guest: Chii Chinogona Kuitwa naNoopept kwauri?